Umbuzo ka lokho Ova, nesithakazelo kubo bonke abalandeli abasanda kuqala kumelwe anikelwe isiko Japanese ukwenziwa Kwezithombe Ezinyakazayo. Lezi uchungechunge olufushane ukuvela njengenhlangano Ngaphezu indaba esemqoka, kodwa abe nenjongo yabo nokubaluleka tetsamelilwati takhe wona.
Kulabo nesithakazelo esikhulu kulokho okufanekiselwa Ova, kukhona sokuqonda lokhu isifinyezo. Ngo-Russian kusho "yasekuqaleni isiqophi izithombe", okuyinto kwalokho ahlukene kuya lwendaba, watshela ngenkathi eyodwa anime. Ifomethi uchungechunge olunjalo ngokuvamile ihilela amaqoqwana amabili noma amane, nakuba, ngezinye izikhathi, inani kuza eziyisithupha noma okunomkhawulo isiwombe esisodwa. Zonke izenzakalo zenzeka emhlabeni efanayo lapho indaba esemqoka ekhulisa. Phakathi show umbukeli Ungabona izinhlamvu entsha ngokuphelele, kodwa ukulungiselelwa akashintshi, ngoba igama Ova uhlale uphawu efanayo ukuze anime yokuqala, ngezinye izikhathi egameni ukucaciseleka, okubhekisele format ikhathuni. Series zile obuphelele imizuzu 23-25 of, ingasaphathwa - nambili.
On umbuzo lokho Ova futhi kungani kwenziwa, kukhona incazelo elula - ukwanda ukuthandwa uchungechunge sokuqala. ikhathuni format akusilo ize okuye kwaziwa kuphela iziqephu ezimbalwa, okuyinto ngokuvamile musa ngisho ezincike ngayo kwezinye. Lapho abalobi balungiselela ukukhululwa enkulu lithathelwe ifilimu ethandwa manga chungechunge, ngokuvamile uya Ova. Izibukeli uyithenga kudiski noma bheka ku-intanethi ngethemba lokuthi izinto zizoba acwebe nge ikusasa lelandzisako. Ngemva kokubuka kuphela kuphakama izinkinga ezengeziwe kaningi, ngoba abalobi isu kuphela ngomlando esizayo. Namuhla kunesimo esithi asifane kwenzeka lapho kwalokho itholakala emva kokukhululwa kwe Umdwebo yokuqala isizini. Khona-ke kuba sobala ukuthi leli Ova futhi kungani isikhululiwe esidlangalaleni. Kunezimo lapho kuphela manga e inqubo yokubhala, kanye ngaphambi kwesizini ezayo anime kuzodingeka silinde isikhathi eside. Khona-ke abanikazi ilungelo lokubuyiswa loko kuchibiyela, okuyinto iyasho futhi ukuthi isimo wobuciko ungaphakathi ukuthuthukiswa futhi konke kube bemlindile. Akukho godu izikhathi ukhiye hhayi wachazela, kakhulu, kwahambisana by ezinye izikhathi ngesizini edlule nokuba umugqa parallel nezinye izinhlamvu.
Indaba nomlando nesenzakalo
Ngokokuqala ngqá, abantu baqaphela ukuthi lokhu Ova anime umkhakha njengoba kwenzeka Ngaphezu indaba isayensi langemaciniso ngokuthi Dallos. Lokhu format ngokushesha ngokufudumele bamukela isiqophi abalobi 'okwabantu abadala' ngesimo isithombe sopopayi. Babenqatshelwe ukukhombisa kumabonakude, ukuze lapho beshintsha bekhuluma disk hard drive, esangenza ngesikhathi 1984 ukuqopha iziqephu ezimbalwa. Kulokhu, ngesakhiwo e opholile anjalo kwakungamelwe, kodwa ngoba ngalesi sakhiwo Lifanele ukwenziwa.
Ngesikhathi 2017 Izibukeli ukwazi ukubuka izithasiselo cishe njalo anime ucishe owaziwa. Noma yimuphi imizwa, imizwelo kanye nemicimbi kungase umsuka Ova. Uthando phakathi izinhlamvu, nezitha eyinhloko inzondo, izenzakalo uyokwambulwa endabeni yesibili, nokunye okuningi. Umkhathi yanoma yimuphi chungechunge anime ikuvumela ukuba uthole izintuba ukuze kuthakazelise isibukeli futhi naye bamcela ukubuka ezinye iziqephu.
Izibonelo Ova ethandwa
Omunye anezele ejabulisa kakhulu side futhi kube "mnandi kakhulu kuNkulunkulu." Ova kule chungechunge has uchungechunge eziyisikhombisa uyaqhubeka indaba Nanami - umnakekeli omusha Earth. It uye savela ubuhlobo eziyinkimbinkimbi ne abakhwelwe impungushe ukuvikela inkosi yayo, kodwa basheshe baba abangane abahle kakhulu, futhi lokuthi umshado wabo usaqhubeka. Uhlamvu main Ngokushesha sabona ukuthi wayemthanda, kodwa akavumelani bangasabeli imizwa yakhe.
Lokhu Ova utshela indaba yabo ngemva Tomoe futhi waba nomuzwa uthando. Manje, ubuhlobo babo bathuthela ezingeni elisha, kodwa kukhona nezinselele ezintsha bazinqobe. Esinye isibonelo ngaphezu sekushiwo kuqala isizini "Attack on Titan". It zonke izethameli kuqala wabona giant, owakhuluma. Azikho izibuyekezo kulesi senzakalo ababhali angazange akwenze, kodwa ngenxa nje, kwakhulisa isithakazelo chungechunge. abafundi Manga ukwazi le mfihlo, kodwa ezibukelini ukubukela anime kuphela, khumbula lokhu ngokuningiliziwe futhi nafantazirovali izinto eziningi ezithakazelisayo. Ova wasiza ubambe isithakazelo ezingeni kwesizini yesibili.
Indlela ukulungiselela salmon steamed
Uma izicathulo Friend too: yini okufanele uyenze futhi kanjani ukuba?